प्रिमियर इन्स्योरेन्स र खल्ती डिजिटल वालेट बीच प्रिमियम भुक्तानी सम्झौता - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७६ असार ९ गते १४:०६ मा प्रकाशित
२०७६ अषाढ ९ गते, काठमाडौं ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड र खल्ती डिजिटल वालेट बीच डिजिटल माध्यम मार्फत प्रिमियम भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
उक्त सम्झौतामा प्रिमियर इन्स्योरेन्सका तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहदेव तिवारी र खल्ती डिजिटल वालेटका तर्फबाट सह–संस्थापक र निर्देशक अमित अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो । सम्झौता पछि प्रिमियर इन्स्योरेन्सका ग्राहकले अब आफ्नो मोबाईलमा रहेको खल्ती एप मार्फत सिधै बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
सो सम्झौता पश्चात ग्राहकले नेपालभर कुनै पनि ठाउँबाट खल्ती मार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले आफ्नो बीमा शुल्क खल्ती वालेटमा भएको ब्यालेन्स अथवा इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाईल बैंकिङ मार्फत सहजै बुझाउन सक्नेछन् ।
उक्त सम्झौताको बारेमा बोल्दै खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवालले भन्नुभयो,
“हामी प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडसँग यो सम्झौता गर्न पाउँदा उत्साहित छौँ । अब प्रिमियर इन्स्योरेन्सका ग्राहकहरुले आफ्नो बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न इन्स्योरेन्स अफिस वा बैंक धाइराख्नु पर्दैन । उहाँहरुले आफ्नो मोबाईलमा खल्ती एप इन्स्टल गरी सजिलै बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ । नगद पैसा बिनाको सरल भुक्तानीको यो एउटा सुरुवात हो । यो पार्टनरशिप सँगै हामीलाई खल्ती नगदपैसा बिनाको नेपालको लागि एउटा अर्को पाइला अगाडी सारेका छौँ जस्तो लागेको छ ।”
प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको स्थापना सन् १२ मे १९९४ मा भएको हो । स्थापना कालदेखि हालसम्म गुणस्तरीय सेवा र व्यवसायिकताका कारणले ग्राहकको सन्तुष्टि जित्न सफल हुनुका साथै स्थानीय र अन्तराष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा प्रतिष्ठा हासिल गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुंजी ५८ करोड ४० लाख रहेको छ । साथै बीमा र पुर्नबीमाको लागि क्तबलमबचम ७ एययच (एस. एन. पि.) जस्तो प्रतिष्ठित एजेन्सीहरुबाट राम्रो मूल्याङ्कन पाएको विश्वकै ठूला र प्रतिष्ठित बीमा कम्पनीहरुसँग साझेदारी गरेको छ । त्यसै गरी सात वटै प्रदेशबाट जनताको पहुँच बढाउन ६१ शाखाहरु सञ्चालनमा छ र बीमा सेवामा नेपाली जनताको पहुंच बढाउन शाखा विस्तारको क्रमलाई निरन्तर अघि बढाईरहने छ ।
मोबाइल एप डाउनलोड गर्न र प्रिमियम भुक्तानी गर्न
‘खल्ती डिजिटल वालेट’ को मोबाईल एप यो लिङ्कबाट khalti.com/appडाउनलोड गर्न र इन्स्योरेन्स प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।